Azia Atsinanana · Febroary, 2009 · Global Voices teny Malagasy
Azia Atsinanana · Febroary, 2009
Tantara mikasika ny Azia Atsinanana tamin'ny Febroary, 2009
Kore : fitontongan'ny ekonomia, orinasa iza no manam-bintana indrindra ny ho velona
Korea Atsimo28 Febroary 2009
Raha nanantena ny maro amintsika fa hifarana tsy ho ela ny fitontongan'ny ekonomia dia hita fa mbola ady haharitra ela izy ity. Mampihena ny isan'ny mpiasa ny orinasa na mampidina ny vokany. Mizara ny traikefany ny terantany anankiray izay miasa ao amin'ny orinasa Japone. Karazana fandrefesana ara-bola maro no nampidirina.....
Hong Kong (Shina)25 Febroary 2009
Mitsidika any Indonezia i Clinton
Amerika Avaratra25 Febroary 2009
Tonga tany Indonezia ny sekreteram-panjakana Amerikana Hillary Clinton ny Alarobia lasa teo. Nanamafy ny “andraikitr'i Indonezia izy amin'ny fandraisana an-tànana ny olana amin'ny ankapobeny, ao anatin'izany ny fampihorohoroana, ny proteksionisma, ny fiovan'ny toetr'andro ary ny olana ara-toe-karena.” Indonezia no firenena silamo lehibe indrindra eran-tany ary fahatelo amin'ny demokrasia malalaka indrindra....
Shina: Manao atsangory eo ambozon'ny filoha Mao
Shina22 Febroary 2009
Tamin’ny 19 Febroary, dia mivezivezy aty anatin’ny aterineto ny sary izay mampiseho ankizivavy iray atao atsangory eo ambozon'ny Filoha Mao. Ekena fa sarivongana mijoro ao Plaza ao Hunan ilay nosoavaliny , tanàna fiavian’ny Mao io. Kanefa, nvetivety monja dia nameno ny voalohan'ny takelaka maro ny sary, ary nahazo tsikera miisa...
FitorahanaBlaogy amin'ny tokony ho izy: Midira amin'ny Fifanakalozan-kevitra Malalaka momba ny VIH/SIDA
Angletera22 Febroary 2009
Ity andron'ny mpifankatia (14 Febroary) dia manamarika, tsy ny fiantombohan'ny fanentanana eto amin'ny Global Voices fotsiny ihany miantso ny olona mba “hampianatra ireo Olona Tiany hampiasa Blaogy na hampiasa ny Micro-Blog,” fa ao koa ireo ainga maro samihafa mikasika ny hetsika ara-pahasalamana mitodika mankany amin'ny VIH/SIDA mba ho fandrisihana ireo...
Japana: Fotoan'ny sery indray.
Japana22 Febroary 2009
Raha toa mantsy ka ny fitiavana ihany no mba eny ambonin’ny lanitra. Efa miiditra tsikelikely ny lohataona, ary ny manomboka miparitaka eny rehetra eny ny vovom-bony avy amin’ny hazo antsoina hoe Cedre. Nanomboka ho ofisialy toa Japan any Kafunsho (ny sery). Nohesorina ny sokola (chocolat) tsy lany tamin’ny andron’ny mpifankatia...
Brioney: ny dia amin'ny ankapobe
Broney20 Febroary 2009
Tahaka ny firenena manerana ny bolan-tany, tsy ho lany olona mazoto hanao fanamby ka hametraka ny firenena ao anatin’ny saritan’izao tontolo izao I Brunei. Iraka 2 no notanterahina.
Kambodza20 Febroary 2009
Shina20 Febroary 2009